Katrina Kaif “Bollywood-ka waa qoys kala bur bursan oo aan is garab qaban karin” – Filimside.net
Katrina Kaif “Bollywood-ka waa qoys kala bur bursan oo aan is garab qaban karin”
Katrina Kaif oo ka mid ah atirishooyinka Bollywood-ka ugu awooda badan dhawaana sameesay filimkii Zero ee SRK iyo Anushka Sharma isa jileen ayaa dhaliil xoogan usoo jeedisay Bollywood-ka oo xaruntooda Mumbai tahay waxayna ku tilmaantay qoys kala bur bursan oo aan garab is garab qabaneyn.
Katrina Kaif filimkeeda Zero ganacsi ahaan wuu guul dareestay sidoo kalena sheekadiisa daawadayaasha masoo dhaweynin inkastoo doorkeeda la amaanay ay filimkan ku laheyd haddana Katrina inta badan arimaha Bollywood-ka kama hadasho iyo sida uu xaalka yahay.
Katrina ayaa ku qasbanaatay ugu dambeyntii ay banaanka soo dhigto kala qeybsanaanta fanka Hindiya ka jirto iyo sida jilayaasha mid walbo midka kale guuldaradiisa ugu faraxsan yahay.
Katrina waxay tiri “Bollywood-ka waxaa ka buuxaan labo wajiilayaal waxaan ula jeedaa kuwo jaceyl inay kula shaqeeyaan kadibna ku farxayaan guuldaradaada! Waana arin adag in la aqbalo dabeecadaha noocaas oo kale.”
“Sidoo kale fanka Hindiya qof walbo dantiisa gaarka ah ayuu ka fikiraa ma nihin hal qoys oo isku duuban kuwaas oo is caawiyaan waxaan nahay qoys kala bur bursan oo aan is garab qaban karin.”
Katrina Kaif ayaa walaac ka qabto sida xaalka fanka Hindiya haatan yahay waxayna aragtaa kala qob qobsanaanta inay sababi karto in Bollywood-ka hormar sameyn waayo fanka Hindiyana uu fanka caalamka la tartami waayo.
Dhanka shaqada Katrina Kaif waxay haatan duubis ku wadaa filimka Bharat oo ay Salman Khan la jileyso lana daawan doono Eid 2019 waxaana Director ka ah Ali Abas Zafar halka Atul Agnihotri uu soo saare ka yahay.